Any Jordania, Mahazo vola Be Foana Ireo Mpandraikiraiky · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Mey 2017 15:42 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, Ελληνικά, Français, Español, English
Ny fianarana momba ny demony Silamo dia ao amin'ny “jiny” (الجن‎‎), niavian'ny teny frantsay hoe “Génie”, ilay avelo mpanompon'i Allah mitovy laharana amin'ny olombelona. Ny tena mahavariana amin'ny finoana sy ny fandraikirekena any Jordania, dia ny fifandraisana mifanohitra amin'ny fanoherana sy fandeferana misy amin'ny fivavahana sy ny “asan'ny maizina”. Zavatra iray no azo antoka: ny finoana silamo dia tsy mandà ny fisian'ny herin'ny maizina, ny mifanohitra amin'izany aza: misy andininy maromaro ao amin'ny Korano mifandray amin'ny fandraikirekena (mazia), na dia ho fanamelohana ilay fomba fanao fotsiny aza.
Raha nanontanian'ny Global Voices raha nino ny herin'ny mazia izy, dia nilaza ny mpamily fiarakaretsaka nitondra an'i Amman Ibrahim Othman fa “ny silamo rehetra dia tokony hino ny mazia noho ny tantaran'i Mpaminany Moussa ao amin'ny Korano.” Araka ny Sourate 7 ao amin'ny Rindrin'ny A'raf ao amin'ny Korano, fony nampanantsoina teo anatrehan'ny Faraona i Moizy, dia nifanatrika tamin'ny ombiasiny, izay nampiasa ody mba hanova ireo tehiny ho lasa bibilava. Noho ny fankatoavan'Andriamanitra, novàn'i Moizy ho bibilava koa ny tehiny, ka nitelina ireo bibilavan'ireo ombiasy. Ary nitsaoka azy (Moizy) izy ireo, ka nanaiky ny faminaniany, raiki-tahotra noho ilay fahagagàna.
Manazava ny maha samy hafa ny ody sy ny fahagagana araka ny korano ilay tantara, izay araka ny tenin'i Ibn Khaldoun, iray amin'ireo miozolmàna lehibe indrindra mpahay tantara, “Ny fahagagana dia herin'Andriamanitra izay manainga ao amin'ny fanahy [ny fahafahana] maneho hery. Tohanan'ny Fanahin'Andriamanitra amin'ny asany ireo [mpanao fahagagana]. Ny mpandraikiraiky kosa, miasa irery ary ny hany manampy azy dia ny herin'ny sainy ihany, ary, amin'ny toe-javatra sasany, miaraka amin'ny fanohanan'ny demony.”
Any Jordania, tafiditra ao anatin'ireo finoana mahagaga miely sy mbola malaza ny fanekena ny fisian'ny “jiny” sy ny finoana ny fahafahan'izy ireo manindry olona, toy ilay “maso ratsy” tsy mety afa-po, ireo ody atao fiaro ary ny Al-matuom — ny fampiasàna ny ràn'ny fadimbolana izay heverina ho “tsy madio” mba hakàna toky ny fitiavan'ny olona iray.